Nhau - Ungasarudza sei kumberi kana kumashure kwesheni yekutungamira kwako.
Nzira dzekuchengetedza dzekuratidzwa kwakatungamirwa dzinonyanya kuve dzakakamurwa pamberi pekugadzirisa uye kumashure-kugadzirisa.
Kudzosera-kugadzirisa yakashandiswa kune LED skrini yekuvaka ekunze madziro, inofanirwa kuve yakagadzirirwa neatisi yekumashure divi kuti munhu iyeye agone kuita kugadzirisa uye kugadzirisa kubva kuseri kwechidzitiro chemuviri.
Ita shuwa kuti humbowo hwemvura hwakaringana munzvimbo yekunze, kumashure inochengetedza yakatungamirwa inodawo aruminiyamu profile yakatenderedza pasuru kuti ive nechokwadi chekuti hapana mvura yakanyura muchiratidziro chakatungamirwa, iro danho rinofanirwa kusvika IP65.
Izvo zvese zvehunyanzvi zvinodiwa zvakakwirira, kumisikidza uye kubvisa zvinorema, uye zvinodya nguva.
Zvakare, zvekuratidzira kwekunze kwakatungamirwa, YWTLED yakagadzira nzira mbiri dzekunze dzakatungamira kuratidzwa kumberi kuchengetedza.
Imwe mhinduro yekumberi kuchengetedza ndeye modular sikuru kutenderera mu pixel p3.91, p4.81, p5.33, p6.67, p8, p10, p16, iyo yekunze humbowo hwenzvimbo hwakatofanana IP65.
Yechipiri yekumberi kuchengetedza ndeyekunze yakatungamirwa kuratidza cabinet pamberi yakavhurika mhinduro.
Mberi yakavhurika musuwo kabhodhi ine hydraulic tsvimbo inosanganiswa ese akatungamidzwa ekuratidzira zvikamu
Nemberi-kugadzirisa, yakatungamira skrini inogona kugadzirwa yakatetepa uye yakajeka, inosanganiswa nenzvimbo dzakatenderedza, kuita inoenderana chitarisiko.
Kune imwe nzvimbo yemukati kunyanya ine compact nzvimbo, kana kumadziro-akaisirwa madhizaini, zviri pachena, haisi sarudzo yakanaka yekuchengetedza kumashure.
Pamwe neNarrow Pixel Pitch LED Ratidza tekinoroji yakagadziridzwa, kumberi-kugadzirisa mukati mekutaridza kwe LED kwakadzora pamusika.
Yakagadziriswa nemagineti kugadzirisa module pane kabhoni kana simbi mamiriro. Vhura kabhodhi rese kana ma module kubva kumberi, Kana wabvarura, Sucker yakanangana nekubata module pamusoro pekumberi kugadzirisa,
Zvichienzaniswa neshure-kugadzirisa, mukana wepamberi-wekuchengetedza LED skrini inonyanya kuchengetedza nzvimbo uye chimiro chekutsigira, kuwedzera nzvimbo yekushandisa uye kudzikisira kuoma kwekutevera basa rekutengesa.
Iyo yekumberi yekugadzirisa nzira haidi aisle, inotsigira yakazvimirira kumberi kugadzirisa, uye inochengetedza nzvimbo pachiratidziro kumashure.
Hapana chikonzero chekukatanura tambo, inotsigira nekukurumidza basa rekugadzirisa, uchifananidza neyekugadzirisa musana, iyo inoda kubvisa akawanda screws kutanga kubvarura module pamberi-kugadzirisa iri nyore uye iri nyore. Nekudaro, nekuda kwenzvimbo inoganhurirwa nzvimbo, chimiro chine zvakakwirira zvinodikanwa pakupisa kwekupisa kweiyo kabati, zvikasadaro iyo skrini iri nyore kukanganisika kukundikana.
Kune rimwe divi, kumashure-kugadzirisa kune mukana wayo wega.
Yakaderera mutengo, yakanaka kupisa kupisa, iyo inonyanya kukodzera padenga remba, mbiru uye imwe chiitiko, uye ine yakakwira kuongorora uye kugadzirisa kushanda.
Nekuda kwekushandisa kwakasiyana, unogona kusarudza idzi mbiri nzira dzekuchengetedza zvinoenderana nezvaunoda.